I-AutoSEO vs. i-FullSEO-Yeyiphi inkonzo ye-Semalt SEO yeyona nto ilungileyo kuwe
Ke, ekugqibeleni uthathe isigqibo sobulumko sokujonga kunye nokusebenzisa iinkonzo zenkxaso ze-SEO ze-Semalt?
Ngombulelo kwisigqibo sakho, kungekudala uya kujoyina iphuli ekhula rhoqo yabathengi abonwabileyo nabonelisekileyo abaye baxhamla kwiinkonzo zethu zokuthengisa zedijithali. Kodwa ngesigqibo siza uxanduva olukhulu ekukhetheni inkonzo elungileyo. Enye ilungele wena kwaye ilungiselelwe iimfuno zakho ezithile kunye neenjongo zeshishini.
Ukuba ujonge ukuphucula ukusebenza kwe-SEO yewebhusayithi yakho, uSemalt unikezela ngeephakheji ezimbini zeflegi: I-AutoSEO kunye ne-FullSEO.
Ngelixa usenokuba unolwazi oluchanekileyo lwento yonke ebandakanywe kwezi phakheji zibini, isekhona indawo yokuthandabuza kunye nemibuzo. Ukuba usaqala kwicandelo le-SEO, ukucaciswa ngokucacileyo kubaluleke nangakumbi.
Ke, namhlanje sithatha ixesha ukuthelekisa iipakethi zethu ezimbini ezithengisa kakhulu ze-SEO. Emva kokuhamba kule ngxelo yokuthelekisa ekhawulezayo, uya kukwazi ukukhetha iphakheji elungele ishishini lakho.
I-AutoSEO kunye ne-FullSEO-Iinkonzo ze-SEO zikaSemalt
Masiqale ngokuhamba kuqala kwimixholo yeephakeji. Ngelixa zombini zijolise kumashishini, kukho umahluko kumda wepakethi nganye. Eli candelo liza kukunika iinkcukacha ezithe vetshe ngomehluko.
I-AutoSEO ngoSemalt yiphakheji 'yendlu epheleleyo' egubungela eyona nto isisiseko kunye nesebenziso phakathi kweinjini yokukhangela (SEO) kwishishini lakho elikwi-Intanethi. Iqhuba umkhankaso we-SEO kwiwebhusayithi yakho kwaye uphumeza imisebenzi eliqela kwiphepha kunye nephepha elingaphandle lokukhulisa ubungakanani bezinto eziphilayo.
Ngaba unayo iwebhusayithi engabonisi kukhangelo lwezinto eziphilayo zikaGoogle? I-AutoSEO inokubonisa indlela njengoko iqhuba eyona misebenzi ibaluleke kakhulu. Ezinye zazo zidweliswe apha ngezantsi:
Uphando lwamagama aphambili- Ukuhlolwa kweshishini lakho, ishishini lakho, kunye newebhusayithi yakho ukuvelisa uluhlu lwamagama aphambili, oko kukuthi, imibuzo efuna ukuba abathengi bakho bakhangele kwi-injini yokukhangela njengeGoogle okanye iBing. Le yenye yezona zinto zibalulekileyo ze-SEO
Ukusetyenziswa kweLungelo lephepha-Ukufakwa kwamagama aphambili angaphakathi kumxholo wephepha ngalinye kunye nephepha ngalinye lewebhusayithi yakho kunye nokwenza nzulu ezinye izinto ezikwiphepha elinesihloko, inkcazo yemeta, kunye neempawu zomfanekiso
Ukwakha ikhonkco- Ukwabizwa ngokuba kukusetyenziswa kwephepha elingaphandle, kubandakanya ukuvelisa nokusasaza umxholo ofanelekileyo kwezinye iwebhusayithi kunye nokufumana amakhonkco kwi-domain yakho. Oku kuphucula ixabiso le-SEO (igunya lesizinda, ubukhulu becala) yewebhusayithi yakho ngokuyalela ijusi ye-SEO kwezi sayithi ukuya kwisizinda sakho
Uhlalutyo lweWebhu- Yonke imihla, veki nganye, inyanga nenyanga, kunye nokuhlaziywa kwekota kohlalutyo lwewebhusayithi ukuqonda iimetronikhi ezahlukeneyo njengokuhamba kwetrafikhi, ukuguqulwa, kunye nokuzibandakanya ngokubanzi kubahambi bakho
I-AutoSEO izenzekelayo kwezi zinto zininzi kwaye ikubonelela ngephulo le-SEO elisebenzayo elijolise ekunyuseni ukuma kwakho kwiwebhu.
Umzobo 1-Ukuvavanya idatha yohlalutyo yinxalenye ebalulekileyo ye-SEO (AutoSEO iyabonelela)
Isici esahlula i-AutoSEO kwi-FullSEO kukuba eyangaphambili inika iziphumo ezikhawulezayo. Ukuba uneshishini le-niche kwaye uqinisekile ngokhuphiswano olusezantsi kwi-Intanethi, i-AutoSEO inokufumana iziphumo kumcimbi weeveki ezimbalwa. Ngengqondo eqhelekileyo, i-SEO ihlala ithatha iinyanga ngefuthe elifanelekileyo. Nangona kunjalo, kuya kufuneka uqaphele ukuba uSemalt uya kwenza uhlalutyo lokuqala ukuqonda ukuba iziphumo zinokukhawuleza kangakanani. Uhlalutyo olucokisekileyo kunye nengxoxo eyalandelayo kunye nenkxaso yabathengi bethu inokukunceda ukuba ufike kunye nexesha elifanelekileyo.
Kule meko, i-AutoSEO ilungile kwezi ntlobo zabasebenzisi zilandelayo:
Abarhwebi abafuna inkxaso ye-SEO aliqela amashishini abo akwi-Intanethi
Iibhlog kunye nababhali abajonge ukutsala ukugcwala / ukufundwa
Ukuphembelela kunye nosaziwayo kwi-intanethi
Thatha umzekelo kaVaibhar Chaurasia we-HealthKart owayesebenzisa iinkonzo zethu ze-AutoSEO ukutyhala ukuma kwewebhusayithi yakhe kuGoogle India. Kwisithuba seenyanga ezimbini, sikwazile ukuphucula uluhlu lwegama lakhe elibalulekileyo-elishishini. "Ndingacebisa kakhulu kwabo baqalayo kunye neenkampani, ezihlupheka ngenxa yezikhundla eziphantsi kunye nokubonakala okungalunganga kwewebhusayithi yazo," utshilo uChaurasia ocebisa uSemalt kubo bonke abafundi abasaqalayo, amashishini, kunye neeMMMEs kwihlabathi liphela.
I-AutoSEO iya kuba lukhetho oluhle ukuba umtsha kwihlabathi le-SEO (okanye intengiso yedijithali, ngokubanzi) okanye ujonge iziphumo ezikhawulezayo. Ukuba ungusomashishini wokuqala ofuna ukuthatha ngokukhawuleza kunye nethuba elipheleleyo lokuqubuka kwecoronavirus, singacebisa i-AutoSEO.
Nangona kunjalo, ukuba iinjongo zakho zide kwaye ufuna ukuzakhela igama eliqinileyo kwishishini lakho kwi-Intanethi nge-SEO, kuya kufuneka ujonge i-FullSEO, iphakheji yethu ye-A-to-Z SEO.
Kule mihla wonke umntu uzibiza njengengcali ye-SEO. Oko kunokuba yinyani ukuba ucinga ukukhulisa iwebhusayithi kunye nokubhala umxholo njengendlela yokufumana iziphumo zezinto eziphilayo. Kwinyani, kwaye uya kuyazi le nto, i-SEO inzulu kakhulu kwaye iyinkimbinkimbi kunoko.
Ukuze ube nomkhankaso we-SEO ophumeleleyo kwishishini lakho ekufumana uguquko lwangempela (okt abathengi bokwenyani), kuya kufuneka uhambe ngaphezulu kwezinto ezisisiseko. Kwaye kulapho i- FullSEO ka-Semalt iza khona emfanekisweni.
Uhlobo oluphambili lwe-AutoSEO, le phakheji ikunika yonke into oyifunayo kwiphulo le-SEO. Ukusuka kuphando lwegama eliphambili ukuya ekubonisaneni, i-FullSEO inayo yonke into ekufuneka ishishini likhulise ubukho bayo be-intanethi kunye nokuqinisa ukuthengisa. Sithetha ngandiphinda-phinda ukugcwala, ukukhokelela, kunye nokubanjwa ngokubanzi kunye negama lewebhusayithi yakho phakathi kweetanethi.
Umzobo 2-Inkxaso yabathengi yenye yezona zinto ziphambili ze-FullSEO xa ithelekiswa ne-AutoSEO
Nge-FullSEO, ujonge ukuthengisa okwandisiweyo, inzuzo, kunye nentsebenziswano kunye nabathengisi beqela lesithathu. Isibonelelo esongezelelekileyo kuwe kunye neshishini lakho kwezi nyanga kunye neminyaka oqhuba ngayo iphulo le-FullSEO liya kukunika umvuzo ixesha elide. Njengoko uyazi, ukwakha iwebhusayithi eqinileyo enegunya eliphakamileyo lesizinda namhlanje kunokukuvuza izibonelelo zeminyaka neminyaka ezayo.
Nalu uluhlu lwemisebenzi ebalulekileyo oza kuyifumana ukongeza kuyo yonke into ebonelelwa yi-AutoSEO:
Ukulungiswa kweWebhusayithi yokuLungisa ubuChwepheshe - ukwenziwa kweCMS, ukuphawulwa kwesi schema, ukuphuculwa kwesantya sephepha, ukugcinwa kweemephu, kunye nokumakishwa kweGA / GTM. Ukuphuculwa ngokupheleleyo kwewebhusayithi yakho kuya kubonelelwa kunye nezisombululo ezinqabileyo ezixhaphakileyo kwi-SEO kunye namashishini okuthengisa
Umxholo - Yonke imfuno yomxholo omnye - ukusuka kwibhlog yewebhusayithi ukuya kwizithuba zosasazo loluntu ukuya kuthi ga kwi-PR iya kufezekiswa, yenziwe, kwaye ipapashwe ngenxa yokuphuculwa kwexabiso lewebhusayithi yakho
Ukubonisana- ukuba umtsha kwi-SEO, ke uyakufuna ukubonisana malunga nezona ndlela zilungileyo. Iphakheji ye-FullSEO kaSemalt iza kukunika iingcebiso malunga nokungeniswa komxholo ngeendlela, amaqhinga aphambili kunye neendlela ezinje ngeziqwengana ezityebileyo, kunye nemisebenzi eyahlukeneyo yokuqinisekisa iwebhusayithi yakho kwiphepha elinye leinjini zakho ozifunayo.
Ngokuyimfuneko, nge-FullSEO, uya kufumana isicwangciso esilungiselelwe ishishini lakho le-Intanethi elijonga umfanekiso omkhulu. Ngaba ungumdlali omtsha we-e-commerce kwishishini lasekhaya esele ligcwele iigigswigs kunye neewebhusayithi ezisekiweyo? I-FullSEO iya kukutyhalela kanye ngasentla kwizikhundla ezikwi-intanethi.
Thatha umzekelo wenkampani ye-e-commerce Zanvic, ethe yathatha indawo iinkonzo zikaSemalt's FullSEO kwaye yakwazi ukwandisa ukugcwala kwabantu ngokusondeleyo kwi-500% ngaphantsi kweenyanga ezisixhenxe. Ukuphela kweenyanga ezintandathu zokuqala zeli phulo, uSemalt wakwazi ukuzisa ngaphezulu kwe-150 yamagama akhe aphambili kwiziphumo ezili-10 eziphambili zikaGoogle.
Kuyabonakala ukuba i-FullSEO ngokuqinisekileyo inomda ongaphezulu kwe-AutoSEO kwaye ithatha indlela ebanzi. Kodwa ke wazi njani ukuba i-FullSEO yeyakho okanye ayikho?
Xa kuthelekiswa, i-FullSEO iyacetyiswa ngookopolotyeni, ii-Startups ezixhaswe lihlabathi ngokubanzi, kunye neenkampani ezinethemba lokuphazamisa ishishini labo.
Nguwuphi Ofanele Ukhethe?
Njengoko unokutsala kumacandelo angentla, kucacile ukuba i-AutoSEO yiphakethe ye-SEO yeenkwenkwezi enemisebenzi enomda kubungakanani bayo. Ke, ilungele umntu ngamnye kunye nabaqalayo abancinci abafuna iziphumo ezikhawulezayo.
Kwelinye icala, uSemalt ucebisa i-FullSEO kwiinkampani kunye neewebhusayithi zorhwebo ezifuna ukucinga ezinkulu kwaye zenze ezinkulu ukuze zikwazi ukuphumelela phambi kukhuphiswano olukhulu.
Ukuthelekisa i-AutoSEO kunye ne-FullSEO: Isishwankathelo esheshayo
Siyazi ukuba abanye bakho bangangxama ukulungisa inkonzo ngoku ngeli xesha lokuvalwa. Ke, nantsi isishwankathelo esheshayo ngendlela ye tafile. Jonga ukuba iiphakheji ze-SEO epheleleyo zahluka njani kwiiparamitha.
Okwangoku, kufanelekile ukuba ube nombono olungileyo malunga nokukhetha kwakho. Ngelixa zombini i-AutoSEO kunye ne-FullSEO inezibonelelo zazo ezithile, kuya kufuneka ukhethe eyona ilungele iimfuno zakho.
Ukuhlaziywa kokuqala kwewebhusayithi yakho, nxibelelana nathi namhlanje . Unokuqala kwakhona ulingo lwakho lwe-AutoSEO ngokucofa apha.